Vaka Kambani Kiredhiti Iwe pachako - Kunzwisisa Bhizinesi Scoring
Bhizinesi Kiredhiti Scoring
Iwo matatu ekutanga mabhizinesi echikwereti ekuzivisa masangano, Dun naBradstreet, Experian uye Equifax, akaongororwa. Iye zvino tava kuzokurukura kuti aya makambani ekuzivisa zvikwereti anoyera sei bhizinesi rako rechikwereti uye zvazvinoreva kwauri. Bhizinesi rega rega rechikwereti mupi anoita yavo yemasvomhu kuongororwa kuti vaone kukosha kwechikwereti chesangano rebhizinesi. Chikamu chimwe nechimwe kana chiyero chinomiririra mukana wekuti mubatanidzwa unobhadhara chikwereti uye nguva yekubhadhara. Yese bhizinesi chikwereti mamaki uye chiyero chinovakirwa pane yakatarwa bhizinesi 'kiredhiti kuita uko kunowanikwa kubva kune vane chikwereti vakatobhadhara kana kuwedzera mari.
Dun naBradstreet Paydex Chikamu
Chii Chikamu chePaydex? Iyo yakapusa yekumisikidza system kubva ku0 kusvika 100, yakafanana neako wega FICO mamaki. Kazhinji 75 Paydex kana yakakura ichave iri yako bhizimusi inogona kumisikidza chikwereti pasina kushandisa kwega garandi uye nemamiriro akanaka. Izvi zviyero zvemitero inobhadharwa kune vanotengesa uye vatengesi kuitira panguva yakakodzera kusekwa kwechikwereti mazwi.
D&B Chikwereti eValuator Uyezve chiratidza zvizhinji ripoti
Nhoroondo yeIntelliscore Report
Experian ndeimwe yemakambani makuru ekuzivisa zvikwereti murudzi. Kupa zvikwereti zvekambani vachishandisa yavo yega nzira yekudyidzana inonzi "Intelliscore" inoshuma. Iye muenzaniso bhizinesi Intelliscore ripoti kubva kuna Experian
Equifax Diki Bhizinesi Kiredhiti Njodzi Chikamu
Equifax ndeimwe huru yemakambani chikwereti mamaki anopa chiyero cheiyo nhamba inomiririra kugona kwechikwereti kwesangano rebhizinesi. Izvo zvirinani zvibodzwa, panjodzi shoma kune mukweretesi.
Diki Bhizinesi Kiredhiti Chirevo Semuenzaniso Kubva kuna Ruzivo
Izvo Zvaunoda Kuvaka Bhizinesi Chikwereti Iwe
Ita mari yako yese yaunoda kutanga, kana zvirinani, nenguva. Nezve D&B, uchafanirwa kuratidza vangangoita vashanu vanokwereta vanomhan'arira nemari inowanwa panguva kuti uwane Paydex ye5 kana zvirinani. Iwo mamwe maviri, iwe uchafanirwa kuve nechikwereti chebhangi uye akati wandei kubhengi akapihwa bhizinesi kiredhiti kadhi ine inogutsa nhoroondo yekubhadhara yeiyo yepamusoro chiyero.
>> Enderera kune Inotevera Nhanho muKuvaka Kambani Kiredhiti - Yako Bhizinesi Yemamiriro Ezvinhu >>
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Ndira 14, 2019
Vaka Kambani Kiredhiti Iwe Pachezvako
Corporate Chikwereti uye Corporate Masangano
Kambani Kiredhiti Bhenefiti
Corporate Chikwereti FAQs
Corporate Chikwereti Zvirongwa
Corporate Kiredhiti Zvikoro
Mamiriro Ehupfumi Emari
Dun naBradstreet Mbiri
Equifax Chikwereti Mbiri
Kugadzira Kambani Kiredhiti Ebhizinesi Rako
Experian Chikwereti Mbiri
Yako Bhizinesi Kiredhi Chitupa